महिला हिंसाको न्यूनीकरणमा चुनौती | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
महिला हिंसाको न्यूनीकरणमा चुनौती
२०७१ मंसिर ५, शुक्रबार ०१:२४ गते
असोजको तेस्रो साता म्याग्दीमा बोक्सीको आरोपमा आफन्तहरुले नै एक महिलालाई दिसा खुवाएको घटना सार्वजनिक भयो । दिसा खुवाउने अरु कोही नभएर उनकै अमाजू र भान्जी थिए । प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ त ग¥यो, तर पीडितले भनेजस्तो उपचार पाउँदैनन् कि भन्ने आशंका अधिकारकर्मीहरुले गरिरहेका छन् । विगतमा पीडकलाई सामान्य कारबाही समेत नगरी एक–दुई दिन प्रहरी थुनामा राखेर छोडिदिने गरेकाले यस्तो आशंका आउनु स्वाभाविक पनि हो ।
म्याग्दी घटनाकै भोलिपल्ट स्याङ्जामा एक जना नवविवाहित महिला घर छोडेर हिँडिन् । घरपरिवार छोडेर हिँड्ने कस्ती गैरजिम्मेवार महिला भनेर समाजमा हल्ला चल्यो । समाजले ती महिलाको कुरा काटियो । घर छोडेर हिँडेको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि यो घटना अलि लम्बिएर प्रहरीसम्म पुग्यो । प्रहरीले भित्री रहस्य बुझ्दै जाँदा श्रीमान्ले यौनसम्पर्क गर्ने बेलामा मुख थुनिदिएकोले असह्य पीडा खप्न नसकी ती महिला भागेको रहस्य खुल्यो । यसमा पनि प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाउनुको सट्टा सामान्य मेलमिलापको उपदेश दिएर छोड्यो ।
गत वर्ष कैलालीको बेलादेवीपुरमा भएको बोक्सी आरोपमा कुटपिट र र अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी घटनामा पनि पीडकहरु आफन्त नै थिए । थारु समुदायमा प्रचलित भलमन्साबाट उक्त घटनामा मेलमिलाप गराउने प्रयास भएकोे मात्र होइन, प्रहरीसम्म घटना नपु¥याउन भलमन्साबाट मानसिक दबाब पनि दिएको पाइयो । यद्यपि, प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ ग¥यो तर त्यसबेला स्वयम् पीडित पक्ष नै यो घटनालाई सकभर अगाडि नबढाउने मनसायमा रहेको पाइएको थियो ।
पछिल्लो समय बलात्कारका घटना अत्यधिक बढेका छन् । अबोध बालिकाहरु बलात्कार हुने घटनामा अधिकांशमा आफन्तहरुकै संलग्नता देखिएको छ । बालिकाहरुमाथि आफ्नै बाबु, दाजुसमेतले बलात्कार गरेका अकल्पनीय घटना सुन्नमा आइरहेका छन् । अरु कसैले बलात्कार गर्न खोजे पनि जोगाउन पर्ने अभिभावकबाट नै यसरी बलात्कार भएपछि ती निरीहहरुले कसबाट सहारा पाउने ? जो रक्षक उही भक्षक भएपछि कसको के लाग्छ ? भक्षकका अगाडि कानुन नै निरीह बनिरहेको छ । कानुनको शासनको धज्जी उडेको छ । महिलाहरुमाथि हुने गरेका यस्ता हिंसा रोक्न प्रहरी, प्रशासन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलिरहेका छन्, तर पनि अपेक्षाकृत महिला हिंसाका घटनामा कमी आउनुको साटो तथ्यांकहरुले झन्झन् बढेको देखाइरहेको छ ।
एकथरी विश्लेषकहरु भन्छन्– हिंसाका घटनाहरु बढेका छैनन्, हिंसाका घटनाहरु विगतमा पनि हुन्थे, तर ती बाहिर आउँदैनथे । पछिल्लो समय चेतनाको वृद्धि र अधिकारमुखी अभियानले महिला हिंसाका घटना बाहिर आउनाले हिंसाको तथ्यांक बढेको जस्तो देखिएको मात्र हो । उनीहरुको विचारमा समाज शिक्षित हुँदै जाँदा हिंसाका घटनामा कमी आएको छ । यो विश्लेषणमा आंशिक सत्यता अवश्य छ, तर पूर्ण सत्यता होइन । किनभने, पछिल्लो समय गरिबी र अशिक्षित समाजमा होइन, शिक्षित समाजमा नै महिला हिंसाका घटनाहरुको बढोत्तरी भैरहेको छ । समाजमा प्रतिष्ठित भनेर चिनिने वकिल, पत्रकार, साहित्यकार, मानवअधिकारकर्मी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, व्यापारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुबाट नै घरका महिलाहरु हिंसाको शिकार बनेका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । प्रतिष्ठित र शिक्षित भनेर चिनिने समाजका पुरूषहरु नै हिंसाका पीडक देखिएकाले हिंसाको कारक गरिबी र अशिक्षा होइन भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।
वास्तवमा हिंसा हुनुको मुख्य कारण गरिबी र अशिक्षा होइन, बरू मानसिकता हो । अर्थात् भौतिक गरिबी होइन, बरू मानसिक गरिबी र दरिद्रताचाहिँ पक्कै हो । कारक चेतनाशून्य दिमाग हो । प्रमाणपत्रले शिक्षित र धनले सम्पन्न हुनुमात्र चेतनाको सूचक होइन, चेतनाको सूचक त महिला हिंसा गर्नुहुँदैन भन्ने बुझाइ हो । त्यो बुझाइ प्रमाणपत्रका ठेली र कानुनका धाराहरु कण्ठ गरेर हुँदैन । प्रमाणपत्रले मान्छे पूर्ण हुँदैन, बरू हरेक व्यक्तिमा अन्तरआत्मादेखिको सकारात्मक सोचाइ, बुझाइ, हेराइ र गराइ हुनुपर्दछ अनिमात्र त्यसलाई चेतना भन्न सकिन्छ । विवेक नभएको ज्ञानको कुनै पनि अर्थ
छैन । महिला हिंसा गर्नेसँग हिँसा गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञान भए पनि हिंसा गर्नुहुँदैन भन्ने विवेक छैन भने उसले हिंसा गरिनै रहन्छ ।
यस कारण विडम्बनाका साथ स्वीकार गर्नुपर्दछ– समाज जति शिक्षित कहलिँदै छ, त्यति नै महिला हिंसाका घटनाहरु बढेको बढ्यै छन् । बरू, स्वरुपहरुमा चाहिँ परिवर्तन भएका छन् । विगतमा महिला हिंसाका घटनाहरु कुटपिट, गालीगलौच, घरबाट निकाला, दाइजोको माग, छोरीमात्र जन्माएको छोरा नजन्माएको आरोपजस्ता प्रकृतिका बढी हुन्थे । पछिल्लो समय आधुनिकताको नाममा सहरी जीवनशैलीतर्फ समाज उन्मुख हुँदै गएपछि महिला हिंसाका स्वरुपहरुमा परिवर्तन भएका छन् । आफ्नै श्रीमान्हरुले इच्छाविपरीतका यौनसम्पर्क गर्ने, यौनसम्पर्क गर्दा अत्यधिक पीडा दिने, अरु महिलासँगको आफ्नो सम्पर्कको खबर श्रीमतीलाई सुनाएर मानसिक तनाव दिने, घरपरिवारको वास्ता नगर्ने, राम्री नभएको भनी हेला गर्ने, अरु महिलाहरुलाई सामाजिक सञ्जाल वा मोबाइलमा अश्लील म्यासेजहरु पठाउने, कार्यालयमा काम गर्ने निम्न तहका महिलाहरुलाई आफ्नो वशमा पार्न पद र प्रतिष्ठाको दुरूपयोग गरी मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्ने, कार्यालयमा आफूनिकट नभएमा अपायक ठाउँमा सरूवा गरिदिने, चरित्रहीनको आरोप लगाउने–लगायतका घटनाहरु पछिल्लो समय देखिएका हिंसाका केही नयाँ स्वरुपहरु हुन् । मूलतः यौनिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुने यस्ता घटनाहरु समाजमा लाज हुने डरले स्वयम् पीडित महिलाहरुले नै बाहिर ल्याउँदैनन् ।
महिला हिंसाका घटनाहरु बढ्नुका कारण धेरै छन् । धेरैमध्येको पहिलो कारण हो, दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नु । दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो, पीडकहरु अधिकांश आफ्नै घरपरिवारभित्रका हुनु । पीडक टाढाको व्यक्ति हुँदा उजुरी गर्न पीडितलाई जति आत्मबल हुन्छ, आफ्नै घरपरिवारको व्यक्ति त्यो पनि आफ्नै श्रीमान्बाट महिलाहरु पीडित हुँदा उजुरीमा जाने साहस महिलाहरुले गर्नै सक्तैनन् ।
पीडित आफ्नै परिवारको भएपछि कारबाही गर्न साहस नगर्नुुको कारण हो, महिलाहरु श्रीमान् र घरपरिवारसँग आश्रित हुनु । श्रीमान् र घरपरिवारसँग आश्रित महिला श्रीमान् र परिवारबाटै हिंसामा परेपछि श्रीमान् र परिवारका सदस्यहरुलाई कसरी कारबाही गराउन सक्तछन्, हाम्रोजस्तो पुरातनवादी समाजमा ? श्रीमान्लाई कारबाही गरेपछि भोलि श्रीमान्ले हेला गरेमा आफू नै अलपत्र परिने डरले महिलाहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा पहिले नै पराजित भैसकेका हुन्छन् । त्यसो त, पराजित हुनुको कारण आश्रित हुनुमात्र होइन– हिन्दू धर्म, संस्कृति र परम्परामा पतिलाई परमेश्वर मान्ने समाजको मान्यता अझै बाँकी छ । भगवान्का प्रतीक मानेको परमेश्वरलाई कारबाही गर्न धार्मिक रुपमा पनि महिला पछि हट्छन् । खासगरी, ग्रामीण महिलाहरु त पतिलाई कारबाही गर्नेतर्फ त सोच्दा पनि सोच्दैनन् । पतिलाई कारबाही गरायो भने सामाजिक रुपमा पनि बेइज्जती भइने र समाजले महिलालाई नै नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने कारण महिलाहरुमा कारबाहीप्रतिको इच्छा र जाँगर देखिन्न ।
त्यसो त, कतिपय महिला हिंसाका घटनामा महिलाले हिम्मत नै गरेर पीडकलाई कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि प्रहरीले पीडकलाई कारबाही नगरेको देखिन्छ । तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने प्रहरीसम्म पुगेका अधिकांश महिला हिंसाका घटनामा प्रहरीले मेलमिलाप गराएको देखिन्छ । सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र पारिवारिक विखण्डनलाई रोक्न मेलपिलाप पनि आवश्यक
छ । मेलमिलापलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नुहुन्न, तर पीडकलाई पुरस्कृत र पीडितलाई सजाय दिने खालको मेलमिलापको घटनाले महिला हिंसामा झन् बढोत्तरी भैरहेको छ । उल्टो, पीडितलाई नै बेकारमा उजुरी गरेछु भन्ने हीनताबोध गराउने मेलमिलाप वास्तवमा मेलमिलाप नभएर मेलमिलापको दुरूपयोग हो । यसले गर्दा हिंसापीडित महिलाको प्रहरीप्रतिको विश्वासमा कमी हुँदै गएको देखिन्छ । फेरि प्रहरी कार्यालयमा भएका अधिकांश मेलमिलाप लिखित नभएर मौखिक हुने हुँदा पटकपटक एउटै व्यक्तिले हिंसा दोहो¥याउँदा पनि पीडकलाई दोषी प्रमाणित गर्न कठिनाइ परेका उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै छन् ।
कतिपय घटनामा महिलाले हिम्मत गरी हिंसाविरूद्ध उजुरी गर्दा समाजले उजुरी गर्ने महिलालाई नै चरित्रहीन भनेका उदाहरण पनि
छन् । यस्तो कार्यमा पुरूषमात्र होइन, कतिपय महिलाहरु पनि पीडित महिलालाई चरित्रहीन भएकाले श्रीमान्ले उसमाथि हिंसा गरेको र त्यो गरेको ठीकै हो भन्न
भ्याउँछन् । न्याय दिने निकायका अधिकारीहरुले पनि पतिले पत्नीलाई २–४ झापड लगाउनु सामान्य हो, यस्ता कुरामा विवाद लम्ब्याउनु हुँदैन भन्दै कारबाहीप्रति उदासीन हुने गरेको भन्ने एक गैरसरकारी संस्थाले
गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नै औँल्याएको थियो ।
महिला हिंसालाई अपराधका रुपमा हेर्न थालिएको धेरै भएको छैन । घरेलु हिंसा नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, २०६६ आए पनि यो कानुन र यसको कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल छ । यदाकदा पीडकलाई सामान्य कारबाही भए तापनि पीडितले चाहेजस्तोे उपचार पाएका छैनन् । पीडकलाई सामान्य कारबाही गरेरमात्र हिंसापीडित महिलाले उपचार पाए भन्ने दाबीलाई पत्याउन सकिँदैन । पीडितले के–कस्तो भौतिक वा मानसिक क्षतिपूर्ति पायो भन्ने दृष्टिबाट पनि हेरिनु आवश्यक छ । निष्कर्षमा भन्दा कारबाही न्यूनीकरण गर्न नसकिनुको मुख्य कारण पीडक र पीडित आफन्त हुनु नै हो । पीडक आफन्त भएपछि पीडित महिलालाई पनि मिल्न दबाब पर्दछ । यसले गर्दा महिलाहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर हुन्छन् र मिल्छन् । अन्ततः विजय फेरि पीडककै हुन्छ । फलस्वरुप, महिला हिंसाचाहिँ बढिरहन्छ ।